မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများများ | ShweProperty.com
ငှားရန် - ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော…
ငှားရန် - လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ အနော်ရထာလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော မီနီကွန်ဒို
ငှားရန် - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၁၃ရပ်ကွက် မေတ္တာလမ်းမပေါ်တွင် mini Condo…
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မအူပင်လမ်းရှိ ငှားရန်သောမီနီကွန်ဒို
ငှားရန် - ဗဟန်းမြို့နယ်၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမ၊ ရွှေဂုံတိုင်တာဝါရှိငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မအူပင်လမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော မီနီကွန်ဒို
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မအူပင်လမ်းရှိ ငှားရန်ရှိ်သော မီနီကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ(1500)ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master bedroom, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…...
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မအူပင်လမ်းရှိ ငှားရန်ရှိ်သော မီနီကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ(1500)ကျယ်ဝန်းပြီး 1Master bedroom, Fully Furnished, ပါကေးစသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။…
Listed 20 November 2018
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော မီနီကွန်ဒို
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော မီနီကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ (1340)ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master bedrooms, 1Single bedroom, ပါကေး…...
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အောင်ဇေယျလမ်းရှိ ငှားရန်ရှိသော မီနီကွန်ဒိုမှာ စတုရန်းပေ (1340)ကျယ်ဝန်းပြီး 2Master bedrooms, 1Single bedroom, ပါကေး…
ငှားရန် - CRA-2880,21လမ်းကွန်ဒိုတွင် (1250)sqft အကျယ်ရှိသောအခန်းအမြန်ငှားမည်။
လသာမြို့နယ်၊21လမ်းကွန်ဒိုတွင် (1250)sqft မာစတာအိပ်ခန်း(1ခန်း)၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(3လုံး)၊ပရိဘောဂ၊ပါကေး…...
လသာမြို့နယ်၊21လမ်းကွန်ဒိုတွင် (1250)sqft မာစတာအိပ်ခန်း(1ခန်း)၊ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(3လုံး)၊ပရိဘောဂ၊ပါကေး…
ငှားရန် - Mini Condo for Rent near Waizayantar Road and Yankin Township
Mini Condo for Rent near Waizayantar Road and Yankin Township Furnished Price. 750000 MMK (500 USD) Unfurnished Price. 550000 MMK (370 USD) Area. 1000 sqf Location. South Okkalapa This property includes 1 Master Bed Room, 1 Single Room, Air Condition, Balcony, Furnished or Unfurnished, Lift , Security…...
Mini Condo for Rent near Waizayantar Road and Yankin Township Furnished Price. 750000 MMK (500 USD) Unfurnished Price. 550000 MMK (370 USD) Area. 1000 sqf Location. South Okkalapa This property includes 1 Master Bed Room, 1 Single Room, Air Condition, Balcony, Furnished or Unfurnished, Lift , Security…
Near Waizayantar Road
ငှားရန် - Sin Yay Kan Street (ဆင်ရေကန်လမ်း)
*Location – Sin Yay Kan Street, Ahlone Township. *Price – 10 Lakhs *Property Type — Condo(Lift) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Parquet, 2-Bathrooms and ready to live located at Ahlone Township....
*Location – Sin Yay Kan Street, Ahlone Township. *Price – 10 Lakhs *Property Type — Condo(Lift) *Area — 1250 sqft *Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, Living room and Kitchen. *Other Features — Floor Type — Parquet, 2-Bathrooms and ready to live located at Ahlone Township.
Sin Yay Kan Street (ဆင်
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ငှားရန် Real Estate ငှားရန် Property များ
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ကယားပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ နေပြည်တော် ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ